မြန့်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ပညာကျင့်စဉ်များ -၂- | Thaing Wizard
This entry was posted in Bando, Boxing, Martial Arts, Martial Arts Article and tagged ဗန်တို, လက်ဝှေ့, ဆောင်းပါး by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.
10 thoughts on “မြန့်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ပညာကျင့်စဉ်များ -၂-”
Pingback: မြန့်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ပညာကျင့်စဉ်များ -၁- | Thaing Wizard
naingoo on April 28, 2013 at 6:21 pm said:
pong on June 3, 2013 at 11:41 am said:
jokertayelay on June 14, 2013 at 2:39 pm said:
ကျေးဇူးပါ ထိုက်ချိစာအုပ်လေရှိလဲတင်ပေးပါအုံး ဘယ်လိုလဲဆိုတာသိချင်လိုပါ
Aung Thu Htet on June 14, 2013 at 10:28 pm said:
ဟုတ်ကဲ့ ထိုက်ကျိစာအုပ်တွေလဲ ရှိပါတယ်။ အမြန်ဆုံး တင်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ စောင့်ဦးဗျာ။ တခြားစာအုပ်တွေ လုပ်နေတုန်းမို့ပါ။
ကျော်ရဲ on September 16, 2013 at 6:38 am said:
မင်္ဂလာပါ အကို အခုလိုမြန်မာ့ရိုးရာသိုင်းပညာနဲ အခြားကိုယ်လုံပညာတွေကိုမတိမ်ကောအောင် ထိန်းသိမ်းဖော်ထုတ်ပေးနေတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင် ပါတယ် အရမ်းလည်းလေးစားပါတယ် အမြဲလည်းအားပေးနေပါမယ်ခင် ဗျ
Aung Thu Htet on September 17, 2013 at 11:45 am said:
အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။ အသစ်တွေဆက်ပြီး တင်ပေးနိုင်အောင် ကြိုစားပါ့မယ်။
ဝင်းထက် on September 27, 2013 at 3:45 am said:
ရိုးရာအ မွေအနှစ်တွေကို ဖြန့် ဝေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ
toehtike on December 15, 2013 at 10:02 pm said:
ဆက်​နိုင်​မြင့်​ on January 16, 2014 at 8:20 am said: